The Waxaad-waa-leeyihiin kaaliyaha VLC, Wondershare Video Converter Ultimate t
Kaaliyaha VLC, Wondershare Video Converter Ultimate waa mid ka mid ah nooc ka mid ah, marka aan ka hadlo taageerada yaabka VLC ah. Tani waa dhab, xirmada dhamaystiran waayo-aragnimo Video ah oo aad u caawin karaa in dhammaan noocyada kala duwan ee dhibaatooyinka halka ciyaaro videos.
Qeybta 1: Ku caawi VLC inuu u ciyaaro files dheeraad ah
Qeybta 2: Beddelaan files VLC in badan oo ka mid files
Qeybta 3: movies Download ama videos for VLC Media Player
Xaaladdan oo kale, VLC uu ku dhuftay, inta lagu guda jiro ciyaaro nooc gaar ah oo video, ka Wondershare Video Converter Ultimate yimaado badbaadiyay. Waxaa loogu badalo kartaa dhammaan noocyada videos ka mid foomka si kale oo waxa ugu fiican ee ku saabsan waxa ay tahay in diinta ayaa qaadata waqti lahayn. Iyada oo taageero file ka badan 150, waxa uu u bedeli karaan qaab video wax kasta oo qaab kale video iyo sidaas, waxay ka caawisaa VLC Media Player dulliga. Waa waajib u leedahay kaaliyaha for Media VLC ka Player . Ujeedadu waxay xusid mudan ee Wondershare Video Converter Ultimate waa in diinta waa 30 jeer ka dhakhsi badan software kasta oo kale oo ku sifayn isku mid ah.
The Wondershare Video Converter Ultimate kaliya aalad awood leh in hawlaha qaab beddelidda in la sameeyo si deg deg ah. Waxay badalo VLC Files in badan oo Files, kaas oo ka yimaadaa isticmaalka weyn dambe ee xaalad kasta. Wondershare Video Converter Ultimate Caawisaa VLC inuu u ciyaaro iyo badalo MTS file. Ciyaaro Video dhammaan noocyada on VLC Player noqdo fudud la software iyo gargaarka ugu fiican, ma jiraan wax argagax ay dhacdo, wax kasta oo ay haysato dhibaato video; sida wondershare Video Converter Ultimate u rectifies waqti.
Diinta files VLC in MP4 Faylal ay ka mid tahay wax kale, kuwaas oo laga yaabaa in aad u baahan tahay si aad u ciyaaro ee aad taleefan smart. In xaaladdaasi, Wondershare Video Converter Ultimate ku yimaado caawimaad.
Marka aad isticmaasho VLC, waxaad u baahan tahay waa in la furo VLC Media Player, ka dibna ku bar sare navigation, oo guji "Media" dhibic, taas oo furi doonaa wax yar DropBox .
Markaas In WordPress waa in aan guji "Open File Multiple" tab, oo sug ilaa menu muuqan doonaa boggayaga shaashadda.
In menu, guji "Add" button, iyo dooran file aad u baahan tahay si loogu badalo. Taas ka dib waxaad u baahan tahay adigoo gujinaya fallaadha hoose, joogo meel u dhow "Play" button. Ka dibna riix on this arrow, oo la furi doona DropBox ah kaliya. Markaas dooran link ah, loo yaqaan "Beddelaan".
Goobaha Default muuqan doona oo kuu ogolaanaya in aad bedesho goobaha ay dhacdo in aad u baahan tahay si ay u; haddii kale kaliya waxaad tagi kartaa duso gudbo oo guji bilowga. Habka raacitaanka Your bilaabo. Tani waa kaliya hal talaabo u dheer, taas oo ka mid ah tegidda oo dhan goobaha iyo iwm waxaad ka arki kartaa snapshots ee la mid ah oo go'aan ka gaari kara weli waa geedi socod dheer in ay sidaa sameeyaan.
Iyadoo Wondershare Video Converter Ultimate ah, waxaad u baahan tahay oo dhan waa inay dajiyaan files VLC in VLC in ay MP4 video Converter u diinta, Dooro MP4 sida qaab wax soo saarka, Beddelaan VLC in la joogo MP4 dhinaca gacanta midigta hoose iyo habka loo sameeyo.
Sida laga arki snapshots ah, waxaad si fudud u xukumi kara in geeddi-socodka ah ee diinta ka dhex Wondershare waa la isu eego aad uga fudud.
Iyadoo Wondershare Video Converter Ultimate , waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa videos for VLC Media Player ka YouTube oo kale Shabakadaha Video Sharing . Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa in ay helaan YouTube ama bogagga internetka wax ku daalacashaduna, ka dibna riix badhamada "Download" taasoo on top of videos si ay u soo guurin.
Waxa kale oo aad ikhtiyaar kale ah geedi socodka dajinta ay kaga dayanayaan URL video in bar cinwaanka ka dibna dhufatey "Ku dar URL" button dhanka bidix si ay halkaas ku paste URL ah.
Markaas, guji "ok" in aad ku darto liiska download oo aad samaysay. Waxaad ka arki kartaa snapshots u la mid ah sida hoos ku qoran.
Gunaanad: Waxaan dhihi karnaa in Wondershare Video Converter Ultimate waa waajib ah in ay leeyihiin software ah ee dadka. Waxaa imanaya iyadoo gacan weyn ka caawiyay in ay dadka isticmaalaya kuwa ciyaaryahan VLC Media iyo taageero weyn ee xaaladaha kala duwan.
Iyadoo interface aad u fududahay in la isticmaalo, xitaa ilmaha aad u isticmaali kartaa adiga oo aan waayo-aragnimo wax kasta oo ka hor. Iyada oo ay fududahay in la isticmaalo interface iyo hab arrin cad in dhamaystirka nooc kasta oo shaqo, software ah waa mid ka mid ah u jeclahay, waayo, dadka oo dhan dunida dacaladeeda. Waa in ay haystaan ​​qalab A, Wondershare Video Converter Ultimate samayn karaa yaabab aad u. Iyadoo kala duwan ee la heli karo fursado duurka oo dhan ka mid ah ay tahay diinta ama dajinta, qalab buuxin kartaa hawlaha fudayd badan leh.
> Resource > VLC > The Waxaad-waa-leeyihiin kaaliyaha VLC, Wondershare Video Converter Ultimate